Warbixin-Doon siday 400 qof ayaa ku degtay badwaynta u dhaxaysa Masar iyo talyaaniga – HormoodNews
Warbixin-Doon siday 400 qof ayaa ku degtay badwaynta u dhaxaysa Masar iyo talyaaniga
04/16/2016 12:15 am by HormoodNews Views: 4857
Naxdin ayaa ay ku dhex abuurtay guud ahaan bulshada somalida kadib markii ay degtay doon weyn oo saarnaayeen dad ka badan 400 qof, kuwaas oo sida la sheegay ay ka bad baadeen ilaa 40 qof.
Qaar ka mid ahaa dadkii ka bad badbaaday Doontaa quustay oo gaaraay 40 qof ayaa waxaa Soomali ka ahaa 7 dhalinyaro ah kuwaas oo mar taleefanka lagula xadhiidhay ay sheegeen in ay arkayeen Doontii ay saarnayeen 400 oo qof oo quustay oo laga soo bad baadiyey 40 oo aan ka nahay aniga iyo 6 kale oo soomali ah, isagoona sheegay in uu arkaayey doontaas oo quuseysa ayna saarnayeen in ka badan 180 qof oo Soomali ah. Waxa kale oo uu yidhi, ma sheegi karno in ay wax kale ka bad badbaadeen ama doontaa degtay.
Shaqsigaan taleefanka lagula xadhiidhay ayaa warkiisa waxaa xaqiijiyey dhowr qof oo kala duwan oo lala xidhiidhay waxeyna noo sheegeen dhowrka qof hadal isku mid ah in doontaas quustay islamarkaana ay saarnayeen dad ka badan 360 qof. Dadka somalida ahina ay ahaayeen 180 qof.
Dhinaca kale waxa uu sheegay qofkan Soomaliga ahi in 40 kooda qof xiligaan loo wado wadanka Giriirga halkaana ay dhawan gaarayaan waxaana ka muuqday shaqsigaas murugo xoogan iyo wal wal aan la soo koobi Karin.
Warbaahinta soomalida ayaa caawa oo dhan ku mashquulsanaa sidii war rasmi ah looga heli lahaa sida ay wax u dhaceen balse waxa muuqata in marba marka ka danbeysa ay isa soo taraayaan wararku.
warka aad webkiina ku qorteen sxbayaal ma la tubaa warkasi ansax ma yahay sxb
04/17/2016 at 4:48 pm
wcs wll waa la hubaa oo dadku intaas way ka badanyihiin oo doontu waxay siday 460 qo in ku dhow
04/17/2016 at 11:29 pm
Inaalilah wa ina ileyhi rajucun Allah u naxariisto inti dhimanatay